Kuleli zwe lanamuhla, imikhiqizo kokuzihlanganisa athandwa kakhulu. Betholakala khona kuyo yonke indawo. Ngokwesibonelo, sibonga fireplaces yabo ukuthola kabanzi look wokuqala, imbali zezitsha Uyi umhlobiso olukhulu egumbini, usebenzile yensimbi izitebhisi ukwenza indlu ibukeke inqaba. Futhi into ezithakazelisayo kakhulu ukuthi konke lokhu kungenziwa ngesandla usebenzisa sokukhanda ngokurhaba. ukulungiswa abahlukahlukene kuhluke kuphela uhlobo fuel esetshenziswa. Umehluko asele fanele azisa abalulekile.
Isidingo ufika ekhaya lokushisa eliphezulu (abangaphezu kwenkulungwane degrees Celsius) ngoba ductile metal izingcweti kuholele umbono ibuthelele uphondo okuzenzela. Uma banesifiso esinamandla futhi benza konke abangakwenza ulandele iziyalezo ezikuyo, uma kungavela awunankinga.
I kwakha ke sisetshenziswa ukufudumeza metal ngaphambi ukufudumeza ukwelashwa futhi angase abe uhlobo:
Namuhla imiklamo classical ezihilela ukusetshenziswa amalahle emhlabeni njengoba uphethiloli noma ngokhuni, kodwa uphondo okuzenzela for ekwakheni kungaba igesi. Njengoba umkhuba ubonisa, uphethiloli ukonga kakhulu kuyinto amalahle, okuyinto ngaphambi zisebenzisa ukwelapha.
Mshini we sokukhanda ulula. Ngokwe-design ukhumbuza ziqhubekele kuhovini ngodonga amathathu uhlangothi evulekile. umsebenzi Its main - ukulondoloza ephakeme kakhulu izinga lokushisa ngaphakathi.
Kudivayisi ziqhubekele inhlangano yalo akuhlukile kangako kusukela ithuluzi ukukhiqiza.
umklamo Classical kufanele abe naloku:
Iziko le nge grate;
ekamelweni emoyeni, valve futhi amanzi;
ukuvulwa ekunikezeni ukudla izikhala;
a imbobo lokondla umoya-mpilo;
ukuhamba komoya negesi ekamelweni;
Ukuphekwa Ngobhojwana NgamaFascist esikhiphekayo.
Ngaphambi ukwakha sokukhanda, kubalulekile ukucacisa uhlobo yayo. Uphondo uhlobo avaliwe has a ekamelweni ukuze amalahle preform. Le modeli ubhekwa le ukonga kakhulu petrol. Kodwa kulokhu, workpiece kukhawulwe ngosayizi.
Uphondo ekwakheni fuel evulekile kuthululwe phezu lethusi, sidla kusukela Ukuhamba phansi. preform Reheated ibekwe phezu nophethiloli. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukufudumeza ezinkulu usayizi workpiece.
Ukuze sikwazi ukwakha uphondo ezenziwe ekhaya ngaphandle kokulahlekelwa izinga layo lomsebenzi futhi ngesikhathi esifanayo londoloza imali, kufanele uqonde isimiso emsebenzini wayo. Idivayisi kusekelwe nokwanda okuphawulekayo lokushisa ngenxa carbon omlilo imithi.
Le nqubo inika energovyhod okusezingeni eliphezulu futhi sekungamakhulu eminyaka yokuncibilikisa ngezinto ezihlukahlukene. Ukuze cupola akazange avumele lokho kwaziswa ukuze ashise, kumele bondliwe kuwo a-mpilo omncane esingaphansi okudingekayo ukuze oxidize ngokugcwele, ngaphandle kwalokho umkhiqizo kuyoba ziyaqothuka kakhulu, futhi ngenxa yalokhu ngeke zihlala kuphela eminyakeni embalwa.
Lolu hlobo lwe-Bugle ukwenza ekhaya akulula ncamashi. sokukhanda Homemade izosebenza kahle kanye negesi, kodwa kuyafaneleka ukuthatha i-propane kuphela, i-butane noma monogaz hlamba. Domestic igesi yemvelo akuyona ezifanele ukusetshenziswa ku zharovnike njengoba has in ukubunjwa kokubili hydrocarbon te futhi unsaturated, okuholela non-iyunifomu ukushabalalisa ukushisa.
Futhi, igesi yemvelo iqukethe zesandulela-silicon, nesibabule ne phosphorus, okungase zibulale metal. Ngokwesibonelo, nesibabule konakalisa kuphela steel ukuxhumana, ukushintsha izinzuzo yokusebenza yayo nemibi. Lokhu kungaholela ukulahlekelwa ngemali okukhulu.
Uma sicabangela lokhu okungenhla, nendlwana wokuzenzela igesi kwemizi ngoba UKWAKHA ongaqhuba ngesikhathi igesi yasendlini kuphela uma evulekile yayo owandulelayo nesibabule. Kuze kube manje uhlelo igesi kumele sidlule isitsha naphthalene, okuyinto thatha zonke engadingekile. Libuye efiselekayo imbombayi blue ziwukuphela izakhi okuhlobisa, kodwa hhayi imininingwane okuzokwenziwa eminye ngaphansi imithwalo eliphezulu.
Njengomthetho, uphondo self-ezenziwe lihlukile version kwezezimboni imali enkulu phezu izinto. Yingakho ungakwazi ngokukhululekile zisebenzisa fireclay izitini esikhundleni asebenza ngebhethri ngoba ulwelwesi yayo. Futhi lona, liyokuma isikhathi eside, ngoba ekhaya akudingi ukusebenza nsuku zonke zedivayisi. Futhi zokukhiqiza kuzoncishiswa kakhulu kwemizi.
The main umzimba tekusebenta cupola kuyinto umkhonto, insabula, ehlanganisa:
Ekhaya, konke lokhu kwenza ukuba kube ukusonga design olulodwa, ogibele etafuleni. Grate kuleli cala bangase perforated nge izimbobo round. Amanzi design kumane kudingekile ukulawula umoya-mpilo ukuze workpiece.
Ukususwa yamagesi Kwenziwa esebenzisa ukusebenza kushimula hood ekamelweni kwemizi. Kusukela amafasitela etendeni ihlale ivulekile, uphondo kushimula okuzenzela kuyadingeka ukuqinisekisa traction esiphezulu.
Kuye uhlobo impahla kwa akakwazi nika zharovnike ukuhamba komoya negesi cell esitsheni futhi eqeda. Futhi, Ngobhojwana NgamaFascist isetshenziselwa kuphela ekwakheni Alloys eziyigugu noma non-ayoni. Kuyinto cap ukushisa ukumelana, okuyinto ekhaya Kumiswa kwi owomileyo ube yiziphethu firebrick.
I-fuel elilungile liphakathi coke ezincane, okuyinto, nakuba Kubiza eqolo ngaphezu kwanoma amalahle kudliwe sokuqhuba ubuncani. Njengoba kudinga ukuthungela lokushisa eliphezulu, okuzenzela kwemizi sokukhanda kumelwe kuqala ancibilike izinkuni. Kwaze kwaba yilapho sebeshiye burning uphethiloli main injected singene preform kwemizi ngoba yokuvuthwa, okwehlisa kuqhuma.
Ukuze usebenze kahle uphondo ilahle ezivamile vyzharit kuba okokuqala ezidingekayo ukuqedela ukuhwamuka of the coke igesi kuhhavini, okuyinto kuyokhanya kusukela ushintsho umbala elangabi. Sebenzisa fuel enjalo ngokuvamile womshini imikhiqizo enkulu yokuqala.
Ukuze kwakhiwe ukuma endlini eDamaseku, ukuze usetshenziselwe kokudubula namalahle, kodwa lokhu fuel kudinga umsebenzi ngamagugu ngoba esabela manjalo podduvanie futhi ngokushesha burns.
Isithando somlilo ingasetshenziswa ukhuni ezivamile izihlahla lezihlahla, kodwa ngaphambi esivuthayo yabo igobolondo ezigcwele ukuvimbela metal chips neprogorevshih. Le ndlela ukukhiqizwa ukushisa ubhekwa le ukonga kakhulu.
Ngaphambi kokwenza esithandweni okuzenzela, kufanele kube ukunquma ubukhulu kahle ukwakhiwa esizayo. Ngokugabisa izakhi ekhaya elincane zokuhlobisa ezenziwe ngensimbi noma encibilika dragtsveta design ngokwanele encane fireclay izitini eziyisithupha.
Futhi grate emashalofini ngaye kuleli cala zakhiwe emapheshana steel futhi amashubhu. Njengoba uphethiloli main esetshenziswa kule samuntu, ilahle ezivamile noma coke okumele ekuvuseni Blowtorch noma sikaphalafini (igesi, benzovozdushnoy). Umsebenzi kudivayisi esinjalo singamane ngaphandle futhi okuzenzela igesi sikaphalafini kwemizi njengoba blowlamp, kumele bavikelwe main kwemizi asbestos ukwahlukanisa imbobo for ukudlula ilangabi. Ngaphezu kwalokho, ngosizo le zingenziwa imikhiqizo amancane naphakathi.
imodeli elimile ka le kufanele kwenziwe ikhumbula idatha anthropometric ye-master. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa induduzo esiphezulu ngesikhathi ekwakheni, njengoba ucezu red-hot yensimbi enesisindo esingaba amakhilogremu ambalwa, futhi imele engozini enkulu zokuyinhloko nabanye. Into ebaluleke kakhulu kule nqubo - ukuze uvikele ukuphepha esiphezulu nenduduzo.
Ukuze kahle ukunquma usayizi emsebenzini, udinga usizo lomunye umuntu. Ngakho, ukuphakama kukalwa kusukela phansi kuze master indololwane whose dlulisa is esimweni esikhululekile futhi izinyawo zakho ububanzi ehlombe ngaphandle. Ukuze lesi sibalo kumelwe wengeze enye 5 cm, futhi ukuphakama kuyoba eliphezulu emsebenzini.
ithebula yakha isikwele kangcono eyodwa master, ngokuba imisebenzi umsizi zingenziwa unxande. Endabeni ka umumo square, izinhlangothi obuphelele kunqunywa sokunquma idayagonali. Ukuze wenze lokhu, kudingeka ulinganise ubude obuyizinkulungwane umsizi inkosi esiswini ngaphambi kokuphela imikhaza enkulu nobude bengalo. Kule nombolo wanezela nesinye cm 10 futhi uphendulela ingxenye ngokuphambeneyo. Ngaphezu kwalokho, uma babefisa ungakwazi umane uphindaphinde yi ngu 1,414 ukunquma ubude noma yonkana idayagonali nokuxazulula i equation C 2 lwezifundo = 2 + 2, lapho C - Ovundlile etholwe, futhi - esigabeni ohlangothini.
Kulandzelana kwalokucuketfwe lokuhleliwe izinqubo
Isinyathelo sokuqala uyahamba ukubiyela itafula grate maphakathi. Kubalulekile ukwenza kube kusuka metal ishidi elilodwa ne canaliculate crosslink ngoba wayenemfuyo kodaka bese ukuqinisekisa ukufana ukusatshalaliswa emoyeni. Ngemva kwalokho, ezansi etafuleni uya ethangini emoyeni nge yesivalo beya. Air ukuzwakalisa ngoba umfutho ingasetshenziswa kusukela kuhhonela imoto endala.
Le modeli Kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Ukuqoqa ingasetshenziswa njengesisekelo bayobhaka isidlo. Ngenxa yalesi imoto supercharged kungaba umnenke noma fan of kwakhala imanyule, ngepayipi nge izimbobo ukusabalalisa emoyeni ngokusebenzisa isikhungo bomkhumbi. Wakhe ngiyeke nge ulwelwesi refractory yesihlabathi Marl. Buhle lokhu design ithuba kunalaba mini-Bugle, futhi ikghono, ngokungafani kuya etafuleni umile. Master ungaboshwa endaweni yomsebenzi kanye kalula ukuhamba ukuze ezahlukene itoho.
akukho kungenzeka ukuqaqa yokuhlanza;
ongaphakeme izinga lokusebenza;
okusezingeni eliphezulu petrol;
isebenza kuphela coke noma ngamalahle.
Ngaphambili, lawa izakhiwo ezisetshenziselwa ekwakheni Horseshoes ukuba amahhashi njengoba kuqhubeka imikhankaso amabutho. Uphondo yasetshenziselwa lokhu mobile futhi kuwusizo kakhudlwana, kusukela ezimbili ezandleni master nanikhululekile ukusebenza umkhiqizo. It enikeziwe indlela crank, okuyinto actuated ngokucindezela isinyathelo unyawo.
A nothayi banamuhla le kungaba uhlanganiswe ekhaya kusukela ezansi kweNtaba umshini wokuthunga.
Buye bachazwa ngokuningiliziwe ngenhla esithandweni okuzenzela, sikaphalafini eziko, kungenzeka zokubasa kanye nezinye izici metal ekwakheni ekhaya. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi umklamo self-ezenziwe akakwazi esikhundleni ngokugcwele inqubo lochwepheshe ke asihambisani zonke izinhlobo zomsebenzi nensimbi.
Ukuqhubekela - mkhuba okwamanje namanje zithandwa, naphezu emakethe enkulu izinto kulula ukuthenga kuka ukwenza. Nokho, uma ufisa, ungenza idivayisi ekhaya ngosizo Izimali ezikhona. Ngenxa wensimbi esitolo encane bazokwazi ukwakha imikhiqizo steel esiyingqayizivele, angasetshenziswa ukuhlobisa emagcekeni yangasese.
Empeleni ukuqoqa uphondo ngezandla zabo kuzo edayisa izinto ilula. Into ebaluleke kakhulu - ulandela imiyalelo abe ithuluzi ukugcina siphephe, bese konke Kuyophumela ethubeni.
Yima izimbali efasiteleni. Ukwenza izandla zabo
Amaqhubu imbongolo ingane: izimbangela, ukwelashwa, zokuvimbela
The best yesayensi amafilimu: uhlu
Lydian umbuso endulo
Amakhethini Trendy futhi yesimanje kwi eyelets. Beautiful, esiwusizo, elula